Ygn News (www.ygnnews.com) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Crime News Ygn News (www.ygnnews.com)
Ygn News ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် မြန်နှုန်းသည် ၅စက္ကန့်သာ ကြာသည်။ Ygn News သည် စာဖတ်ပရိသတ်များဖတ်ရှုရလွယ်ကူစေရန် အရေးကြီးသတင်း၊ လူကြည့်အများဆုံးသတင်း နှင့် အခြားသတင်းထူးများကိုထင်ရှားစေရန် အရောင်မျိုးစုံဖြင့် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိသည်။ Ygn News တွင် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ၊ မှုခင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားထူးဆန်းထွေလာစာဆောင်များကိုတင်ပြလေ့ရှိသည်။
ဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆန်းဆင့် ဘာကြောင့် တရားရုံးမှာမျက်ရည်ကျရတာလည်း။ AGD ဘဏ်မှာ ၆၀% အစုရှယ်ရာဝင်ထားတဲ့ ကိုကျော်နေဝင်းနဲ့ အင်တာဗျူး။ ချစ်သူကိုဒေါသအလျောက် သတ်ခဲ့ပြီးမှ ဇာပနာအခမ်းအနားမှာ ပြန်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ သတင်းစသဖြင့် ပြည်တွင်းသတင်းများ၊ ထူးဆန်းထွေလာသတင်းပေါင်းစုံကိုတင်ပြပေးနေသောဆိုဒ်ဖြစ်သည်။မြန်မာသတင်းအချက်အလက်များကိုယုံကြည်ရစေရန် သက်သေအဖြစ် ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ အသံဖိုင်များဖြင့် အတိအကျဖော်ပြပေးသည်။ သတင်းရင်းမြစ်များကိုကိုယ်ပိုင်သတင်းရေးသူများ၊ Myanmar CNN, Kamaryut Media, Trend Myanmar, စသဖြင့် မူရင်းရေးသားသောဆိုဒ်များကို credit ပေးဖော်ပြပေးသည်။ ပြည်ပသတင်းများအနေဖြင့် စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ် စသဖြင့် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများသတင်းအားခေါင်းစဉ် တစ်ခုစီအနေဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဥရောပသတင်းများအား နိုင်ငံတကာသတင်းခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Ygn News isavery fast-paced and easy to navigate Myanmar News Website. Ygn News webpage is simply designed and Ygn News has made its website very user-friendly. Ygn News has various contents; Burmese local news, international news, crime, Myanmar Politics, Economy in Myanmar, Myanmar’s Education, Health and Fitness and much more categories. Interview with Ko Kyaw Nay Win who had 60% shares with AGD bank, Tragic news ofaman murdering his girlfriend out of anger and proposing the corpse at the funeral, etc. Ygn News provides video files as well, so it can be saidacredible news site. Ygn News also collects and shares Ygn News‘ contents from Myanmar Cnn, Kamaryut Media, Trend Myanmar,etc and Ygn News gives proper credit to the sites.
Previous articleMyanmar Dictionary Download
Next articlePopular Myanmar (www.popularmyanmar.com)